कोरियामा भोलीबाट खोप अभियान सुरु हुँदै, नेपालीहरुले कुन चरणमा पाउलान खोप? – Eps Sathi
February 25, 2021 1185
लामो समयको पर्खाइपछि दक्षिण कोरियामा भोलीबाट कोरो’ना भाइ रस बिरुध्दको खोप महाअभियान सुरु हुँदैछ। गत बर्षको जनवरी महिनामा पहिलो को’रोना भा’इरस पुष्टि भएपछिका दिनमा आजसम्म आइपुग्दा कुल संक्रमितहरुको संख्या करिब ९० हजारको नजिक पुगिसकेको छ। आज पहिलो लटका १५ लाख डोज खोप बोकेर पानीजहाज तथा हवाइजहाजहरु कोरियाका बिभिन्न ठाउँमा प्रस्थान गरेसँगै यो अभियान सुरु भएको झल्को दखिएको छ।
शुक्रबारबाट सुरु हुने पहिलो चरणमा एष्ट्राजेनेका कम्पनीले उत्पादन गरेको १५ लाख डोज करिब ७ लाख ५० हजार जनालाई दिइने छ। यो कम्पनीले बनाएको खोप १ जनालाई २ डोज लगाउनुपर्दछ। यो चरणमा स्वास्थ क्षेत्रमा खटिएका कामदारहरु तथा नर्सिङ होममा रहेका बिरामीहरुले खोप लगाउन पाउनेछन्। यो चरणका सबै खोपहरु निशुल्क लगाइनेछ।
कोरियामा प्रयोग हुने खोपहरु यहिँको स्थानिय एसके बायोसाईन्स कम्पनीले खोप निर्माता ब्रिटिश स्वेडेनी कम्पनी एष्ट्राजेनेकासँगको सहकार्यमा कोरियामै उत्पादन गरेको हो। करिब १ टन तौल भएको खोप बोकेर ट्रकहरु इन्छनमा रहेको चिस्यान केन्द्रबाट आज विहान ५:५० बजे छुटेका छन्। यि ट्रकहरुलाई प्रहरी र सेनाले स्कर्टिङ गरेका छन्। इन्छन कोरियाको राजधानी सउलबाट ८० किलोमिटर दक्षिणपूर्बमा अवस्थित छ।
पहिलो सिपमेन्टमा प्रयोग भएका ५५ वटा कन्टेनरहरु करिब २ घण्टा ढिलो प्रस्थान गरेका थिए। ढिलाई हुनुको कारण यो खोपलाई अति चिसो अवस्थामा राख्नुपर्ने भएकाले थप साबधानी अपनाउदा भएको हो। भोलीबाट सुरु हुने खोप अभियानको पहिलो ५ दिनमा एष्ट्राजेनेकाको खोप १ हजार ९०० केयर ह स्पिटलमा रहेका मानिसहरुलाई दिइने छ। एष्ट्राजेनेकाले उपलब्ध गराएको पहिलो चरणको डोजले ७ लाख ८५ हजार जनालाई २ डोजका दरले लगाउन पुग्ने देखिन्छ जुन यसअघि अनुमान गरिए भन्दा करिब ३५ हजार बढि हो।
यो एष्ट्राजेनेका कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप अरुभन्दा लगाउन सजिलो छ किनभने यसलाई मात्र २ देखि ८ डिग्री माइनस तापक्रममा राख्दा हुन्छ। अमेरिकन औषधी कम्पनी फाइजरले उत्पादन गरेको खोप करिब माइनर ७० डिग्रीमा राख्नुपर्ने हुन्छ जुन एकदमै गाह्रो कुरा हुन आउँछ। कोरियाका स्वास्थ अधिकारीहरुले जनाएअनुसार दिर्घ रोगीहरु, नर्सिङ होममा रहेका बि रामीहरु, रि हाव सेन्टरमा रहेकाहरु समेत गरि कुल २ लाख ८९ हजार २७१ जनालाई पहिलो चरणमै खोप दिइनेछ।
त्यसैगरी यहि शनिबारबाट फाईजर कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई लगाइनेछ। दक्षिण कोरियाले यहि बर्षको नोभेम्बरस्म अधिकांशलाई खोप दिइसक्ने तथा सेप्टेम्बरसम्म कुल जनसंख्याको करिब ७० प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
कोरियामा तपाइले कहिले भ्याक्सिन पाउनुहुनेछ? जान्नका लागि यो लेख पढ्नुस
Prevआरम्भ चौतारी लघुवित्तले गर्यो लाभांश घोषणा, हेरौं कति बाँढ्ने भयो बोनस
Nextमास्क लगाउन आग्रह गर्दा बस ड्राइभरलाई धम्क्या उने एक यात्रुलाई ६ महिना जे ल
दोश्रो दिनसम्म करिब ८८ प्रतिशत बिक्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओ
कोरिया जाने प्रकृया सुरु हुन अझै १ महिना लाग्ने
मध्य अगष्टबाट कोरियामा १८ देखि ४९ बर्षका करिब १ करोड ७० लाखले खोप पाउने